Uselinde izincomo zendlunkulu 'ozoluleka' iSilo esisha - Ilanga News
Home Izindaba Uselinde izincomo zendlunkulu ‘ozoluleka’ iSilo esisha
Uselinde izincomo zendlunkulu ‘ozoluleka’ iSilo esisha
uthi akafuni ukuyikhulumela eziko
UMNTWANA uMbonisi Zulu oqokelwe esikhundleni sokuhola uhlaka oluzokwe-seka isihlalo sobukhosi bukaZulu.
UMNTWANA uMbonisi Zulu ogixabezwe ngomsebenzi onzima wokweluleka iSilo esisha udalule ukuthi wu-mhlangano wendlunkulu kaZulu ozomcacisela ngokubhekwe kuyena kulesi sikhundla esibucayi aqo-kelwe kusona ngo-elethu emhla-nganweni wabantwana obungo-Mgqibelo esishayamthetho esidala sasoLundi.
Utshele ILANGA ukuthi kusekusha kakhulu ukuthi usengaveza ukuthi lolu hlaka luzoseseka nga-yiphi indlela isihlalo sobukhosi bukaZulu esivuleke kukhothama iMbube uGoodwill Zwelithini ka-Bhekuzulu ngenyanga edlule.
ISilo sikhothame sekusele ka-ncane ukuba sihlanganise iminyaka ewu-50 sikulesi sihlalo esasi-thatha ngoZibandlela (December) wango-1971. Yisona esibuse imi-nyaka eminingi kunawo wonke amakhosi akwaZulu.
UMntwana uMbonisi uthe kwa-yena umndeni kawukamtsheli ukuthi kufanele aseseke ngayiphi indlela lesi sihlalo okumanje siba-njiswe okwesikhashana uNdlu-nkulu waKwaKhangelamankengana uMantfombi, uMaDlamini odabuka eSwazini.
Ekhuluma neLANGA uMntwana uMbonisi uthe: “Musa ukufuna ukuba ngiyikhulumele eziko. Ngi-qokwe wumndeni ngakho yiwona (umndeni) ozohlahla indlela ebhe-ke phambili emhlanganweni ozolandela ukuthi ulindele ukuba si-kwenze kanjani (lokhu osijube khona). Phela ubukhosi kabufani nepolitiki lapho umuntu ekhethwa khona kuthi ngakusasa abe ese-kwazi ukuthi njengoba eseqokiwe uzokwenzani.”
Echaza uMntwana Thembi ongudadewabo weSilo, uthi isizathu esenze bakhethe lolu hlaka oluzoseka isihlalo sobukhosi yi-ngoba amazinyane asemancane (ezindabeni zobukhosi), asadinga ukufundiswa nokucijwa ngezinto zobukhosi ulungiselela ukuqokwa kweSilo esisha.
“Yize singakazi kwayithina ukuthi ngubani ozokuba yiSilo kodwa kubalulekile ukuba khona kwalolu hlaka oluzokweseka lowo ezothatha. Umntwana waseKhwezi (uMbonisi) simqoke ngoba simbona ukuthi angakwazi ukukwenza ngempumelelo lokhu njengoba enalo lonke ulwazi ngeNdlunkulu nobukhosi bukaZulu,” kusho uMntwana uThembi.
UMntwana uMbonisi uthi okwe-nze akaze atshelwa ngoMgqibelo ukuthi kulindelekeni kuyena wu-kuthi umndeni ubungaphelele kulo mhlangano.
“Konke sizokukhuluma kulo mhlangano esizokuba nawo ngelizayo,” kusho uMntwana uMbonisi.
UNdunankulu kaZulu iNkosi uMangosuthu Buthelezi uthe ube-nganalwazi lwalo mhlangano. Oku-qaphelekile kube wukungabibikho kwamazinyane amaningi neBamba Bukhosi uNdlunkulu uMantfombi.
Previous articleUmfundisi umuke wafa ethandaza olwandle
Next articleKusemnyama ngemali yabanqoba kuma-KZN awards